Last updated: Dec. 27 2017 | 2 Maminitsi verenga
Ndiani kunze uko akamboenda yomusi musikana akareba kupfuura ivo kana mukomana mapfupi pane kwavari? Zvafamba sei? Zvakanga kusagadzikana kana kungoti panokwanisika? Nyaya iyi yave boggling kudanana chiitiko kwechinguvana zvino, sezvo vamwe vanodavira vanhu havafanire zuva vasikana akareba kupfuura ivo kana vakomana mapfupi pane kwavari. Ndiyo mukuru nguva dzidziso iyi demystified pamwe sezvazviri!
OK, saka pamwe yaigona unzwe kusagadzikana vachikotama pasi kutsvoda mukomana ane mapfupi sezvo zviri vaidavira kuti vakomana kunge akareba? Asi kupi kuti utongi vanobva? Zvinorevei kuti pfupi vakomana nevasikana vakareba havambofaniri kufambidzana nokungoti anobata zvokufambidzana Chiitiko?
Ko kana musikana hurefu anoda pfupi Guy uye vakutarisire? Zvinofanira zvose kubika pasi zvatinoda sezvo paine vaya chaizvoizvo vanosarudza nevasikana akareba uye mapfupi vakomana, kuzvitenda kana kwete! Uye vanhu vakadaro vachaenda mberi vachifambidzana, pasinei chii vamwe vanoti.
Chero bedzi mukomana nemusikana vane achinyatsoita nomumwe kukwirira, ipapo hapana mumwe munhu ane kodzero kuedza kumanikidza pfungwa dzavo pamusoro pavo. Zvakakosha kuti dzidziso iyi demystified sezvo vamwe vangadai vachiri nharo kuti zvive nyore kutaura pane kuzviita, achiwedzera kuti vakomana vari wired that kuti nguva dzose kuva akareba kupfuura vasikana, uye achagara kunzwa uchinyara kana vari mapfupi.
Zvinonzi kuti vakomana haazorambi hazvo vataure payo, asi vamwe mashoko vanoita achafumura sei zvakanaka vari pamwe musikana hurefu. Hakuna kuzombova chinhu chinokwezva pamusoro mukomana ane kuchengeteka pamusoro pachavo.
Self-chivimbo nguva dzose kunokosha guru basa munyaya dzakadaro. Sezvo ivo vane zvevakomana, ipapo pfupi vakomana kunge nechivimbo pachavo ganda ravo uye regai kunetseka kwavo kukwirira. Izvi zvinogona kunyange Score pavo musi nekamusikana akareba vavakanga fancied, asi kumbofunga vaienda navo pamusana kukwirira.
Oh hongu, vasikana varefu havafaniri kunyemwerera chete asi sezvo ivo vane zvinhu zvishomanana kudzidza pachavo. Achifambidzana pfupi mukomana haakupi kodzero vayambukire yavo yakakwirira kusakwana pasi huro dzavo. Ipa Guy kuregawo, ayo zvakaoma zvakakwana rine kuti tiptoe kuti akupe netsvodo!
reba, rima, uye akanaka hazvirevi kuva ndozvakajairwa. Sezvinongoitawo nokukwirira anotarira anokwezva, izvozvo hazvifaniri kusarudza chinhu kana pane unhu kuti vari kupfuura.
Regai kufambidzana kukwirira, zuva munhu! Ingangodaro kuwana mukomana ane murefu, asi ane unhu kana kunyange maonero chakakura pizi. Same anoenda nokuti vasikana. Kukwirira inofanira chete kuva chiduku chikonzero, kwete kusarudza chinhu. Kana munhu chinoitika kudanana munhu ane nokukwirira vanoda, zvakanaka. Kana zvisiri, zvichiri zvakanaka.
Nokuti vaya vanoisa kukwirira sezvo chokutanga kana achitsvaka yemichindwe, ipapo vanofanira kufunga pachavo kutanga sezvo ivo pamwe vaigona ndivo vane dambudziko. Urefu hazvigoni kudzorwa, asi mafungiro anogona. Zvichida iyi ndiyo chete nzira kuti dzidziso iyi vasikana kuzvisimudzira pamwe mapfupi vakomana demystified.